IATA: Ọ dị oke mgbagwoju anya n'ụzọ ala ga-emepe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » IATA: Ọ dị oke mgbagwoju anya n'ụzọ ala ga-emepe
Willie Walsh, Onye isi Director IATA
Mkpuchi njem mba ofesi na nke ime ụlọ bụ usoro iwu dị mgbagwoju anya na -agbagwoju anya nke nwere obere nkwado n'etiti ha.
Mkpuchi njem zụtara gọọmentị oge ịzaghachi n'oge mmalite nke ọrịa COVID-19.
N'ime ọnwa ndị gara aga, ọtụtụ ahịa igodo ndị emechiri emeela emeghere ndị njem ọgwụ mgbochi ọrịa.
N'ime ahịa emechiri emechi, Europe bụ onye na -ebugharị mbido, Canada, UK, US na Singapore sochiri ya.
International Associationgbọ njem ụgbọ elu (IATA) kpọrọ oku ka akwụsị njedebe mmachi njem COVID-19 na-ekwekọghị ekwekọ nke na-egbochi mgbake nke ụgbọ elu. Ọ gbara ndị gọọmentị ume ka ha mejuputa usoro dị mfe iji jikwaa ihe egwu dị na COVID-19 ka ala mepere emepe maka njem mba ofesi.
“Mmachibido njem zụtara gọọmentị oge ịzaghachi n'oge mmalite nke ọrịa ọjọọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, ebumnuche ahụ adịkwaghị. COVID-19 dị n'akụkụ niile nke ụwa. Mgbochi njem bụ usoro iwu dị mgbagwoju anya ma na -agbagwoju anya nke nwere obere mmekorita n'etiti ha. Enwerekwa obere ihe akaebe iji kwado mmachi ókè na -aga n'ihu na mbibi akụ na ụba ha na -akpata, "ka o kwuru Willie Walsh, Onye isi Director IATA.
Nsonaazụ nnwale maka ndị njem na -abata UK na -egosi na ndị njem anaghị agbakwunye ndị bi na mpaghara ahụ ihe egwu. N'ime nde mmadụ atọ rutere n'agbata Febụwarị na Ọgọstụ, naanị 42,000 nwalere ihe ziri ezi - ma ọ bụ ihe na -erughị 250 kwa ụbọchị. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ ikpe kwa ụbọchị na UK bụ 35,000 na akụ na ụba - ewezuga njem mba ofesi - mepere emepe. Ndị mmadụ kwesịrị inwe onwe ha ime njem, "Walsh kwuru.
N'ime ọnwa ndị gara aga, ọtụtụ ahịa igodo ndị emechiri emeela emeghere ndị njem ọgwụ mgbochi ọrịa. N'ime ahịa emechiri emechi, Europe bụ onye na -ebugharị mbido, Canada, UK, US na Singapore sochiri ya. Ọbụna Australia, nke nwere ụfọdụ ihe mgbochi siri ike, na-eme ihe iji mepee ndị njem ọgwụ mgbochi ka ọ na-erule Nọvemba.
obodo ntà na-akwado mmegharị ndị a ma na-agba gọọmentị niile ume ka ha tụlee usoro a maka imeghe oke ala:
Ekwesịrị inye mmadụ niile ọgwụ mgbochi ozugbo enwere ike.
Ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ekwesịghị ihu ihe mgbochi ọ bụla ime njem.
Nnwale kwesịrị ime ka ndị na -enweghị ọgwụ mgbochi nwee ike njem n'enweghị kwarantaini.
Nnwale antigen bụ isi ihe na-adị ọnụ ahịa ma dịkwa mma maka usoro nnwale.
Gọọmentị kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka nnwale, yabụ na ọ bụghị ihe mgbochi akụ na ụba maka njem.